Lioka 8: 1-56
Lioka 7 Lioka 8 Lioka 9
Nivoaka ny mpamafy hamafy ny voa; ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dàlana ka voahitsakitsaka, ary dia lanin'ny voro-manidina.
Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, dia naniry ka namoa zato heny. Ary rehefa nilaza izany Izy, dia niantso hoe: Izay manan-tsofina ho enti-mihaina, aoka izy hihaino.
Ireo teny amoron-dàlana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao am-pony, fandrao hino izy ka hovonjena.
Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na mametraka azy ao ambanin'ny farafara; fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy, mba ho hitan'izay miditra ny mazava.
Ary ny renin'i Jesosy sy ny rahalahiny nanatona Azy, fa tsy nahazo nihaona taminy, satria nifanety ny vahoaka.
Fa namaly Izy ka nanao taminy hoe: Ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankato azy.
Ary nony nandeha ny sambokely, dia azon'ny torimaso Jesosy; ary nisy tafiodrivotra nidina tamin'ny farihy, ka nila ho feno rano ny sambo, ary saiky nahita loza izy ireo.
Ary nanatona izy, dia namoha Azy ka nanao hoe: Tompoko, Tompoko, maty izahay! Dia nitsangana Izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny onja-drano. Ary dia nitsahatra izany, ka tonga tony tsara ny andro.
Fa nony nahita an'i Jesosy izy, dia niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe: Moa mifaninona akory izay sy Hianao, ry Jesosy, Zanak'Andriamanitra Avo Indrindra ô? Masina Hianao, aza mampijaly ahy.
Fa Izy nandidy ny fanahy maloto hivoaka tamin-dralehilahy. Fa efa nahazo azy ela izany; ary efa nafatotra tamin'ny gadra, na ny tànany na ny tongony, ka nambenana izy; nefa notapahiny ny fatorana, ka dia nentin'ny demonia niriotra nankany an-efitra izy.
Dia nivoaka ny olona mba hizaha izany natao izany; ary tonga tany amin'i Jesosy izy, dia nahita an-dralehilahy, izay efa nivoahan'ny demonia, fa indro izy nipetraka teo anilan'ny tongotr'i Jesosy nitafy lamba sady ary saina; dia raiki-tahotra ireo.
Ary,indro, dia tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny synagoga; dia niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony.
Fa nanana zanakavavy tokana tokony ho roa ambin'ny folo taona izy, ary efa ho faty razazavavy. Ary raha nandeha Jesosy, dia nanety làlana Azy ny vahoaka.
Dia nankao ivohon'i Jesosy revehivavy ka nanendry ny somotraviavin-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny.
Ary hoy Jesosy: Iza moa no nanendry Ahy? Ary rehefa samy nanda izy rehetra, dia hoy Petera sy ny namany: Tompoko, ny vahoaka betsaka ka mifanety ka manizina Anao.
Fa hoy Jesosy: Nisy olona nanendry Ahy: fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko.
Ary raha mbola niteny Jesosy, dia tonga ny anankiray avfy tany amin'ilay mpanapaka ny synagoga ka nanao hoe: Maty ny zanakao-vavy; aza manahirana ny Mpampianatra.
Fa Jesosy, raha nahareo, dia namaly azy ka nanao hoe: Aza matahotra; minoa fotsiny ihany, dia ho velona izy.
Dia nihomehy Azy fatratra ny olona, satria fantany fa efa maty razazavavy.
Ary dia talanjona ny ray aman-dreniny; fa Jesosy nandrara azy tsy hilazalaza amin'olona ny zavatra efa natao.